दैनिक ओखर खाँदा पुरुषका यस्तै थुप्रै समस्या हट्ने, खाने सही तरिका के त ? हेर्नुस – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / दैनिक ओखर खाँदा पुरुषका यस्तै थुप्रै समस्या हट्ने, खाने सही तरिका के त ? हेर्नुस
admin May 6, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 222 Views
ओखर एक प्रकारको ड्राइ फ्रुट हो जसमा ओमेगा थ्री हुन्छ । धेरैजसो मानिस यसको सेवन स्न्याक्सको रुपमा गर्छन् । ओखरमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छन् । ओखर खानु पुरुषका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । पुरुषमा स्पर्म काउन्ट बढ्नेदेखि तालुपनाको समस्या कम गर्न ओखर निकै सहयोगी हुन्छ । ओखरलाई तपाईं विभिन्न तरिकाले आफ्नो खानामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, विशेषज्ञका अनुसार ओखरको एउटा निश्चित मात्रा मात्रै सेवन गर्नुपर्छ नभए पेटमा समस्या हुनसक्छ । यो लेखमा पुरुषका लागि ओखर खानुका फाइदा र यो खाने सही तरिकाबारे कुरा गर्नेछौँ ।
ओखरमा कुन पोषक तत्व पाइन्छन् ?
ओखरमा पाइने पोषक तत्वको कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रोटिन, कार्ब्स, फाइबर, फ्याट, फोलिक एसिड पाइन्छन् । ओखरमा फस्फोरस पनि निकै राम्रो मात्रामा पाइन्छन् । ओखरमा बीसिक्स भिटामिन पाइन्छन्, यसले प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ र तपाईं रक्तअल्पत्ताबाट बच्न सक्नुहुन्छ । ओखरमा म्याग्नेसियम पनि पाइन्छ र यसबाहेक भिटामिन ई पनि निकै राम्रो मात्रामा हुन्छ । यसले पुरुषमा तालुपनको लक्षणबाट जोगाउन सक्छ ।
पुरुषका लागि ओखरका फाइदाः
१. ओखरको सेवन गर्दा पुरुषमा शारीरिक कमजोरी टाढा रहन्छ ।
२. तालुपनाको उपचारको रुपमा ओखरको सेवन गर्न सकिन्छ । यसको सेवनले कपाल पनि राम्रोसँग बढ्ने गर्छ ।
३. पुरुषमा शुक्रकिटको क्वालिटी राम्रो गर्नका लागि पनि ओखरको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
४. ओखरको सेवन गर्दा शुक्रकिटको संख्या बढ्छ । जुन पुरुषलाई बेबी प्लानिङमा समस्या भइरहेको छ, उनीहरुले ओखर खानुपर्छ ।
५. ओखर खाँदा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ । यसले कोलोरेक्टल क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ ।
६. पुरुषमा मुटुरोगको खतरा बढी हुन्छ, जसलाई कम गर्नका लागि तपाईं ओखर खान सक्नुहुन्छ ।
ओखरको सेवन कसरी गर्ने ?
– तपाईं ओखरलाई ब्रेकफास्ट वा स्न्याक्सको रुपमा खान सक्नुहुन्छ । ओखर खानुको सबैभन्दा राम्रो तरिका, त्यसलाई रातभरी भिजाएर राख्नुहोस् र बिहान उठेर यसको सेवन गर्नुहोस् । यसरी खाँदा तपाईंले ओखरको पूरा फाइदा पाउनुहुनेछ ।
– तपाईंलाई मनपर्छ भने केही ड्रिङ्क बनाएर त्यसमा ओखर मिसाएर खान सक्नुहुन्छ । तपाईं ओखरको स्मुदी वा शेक बनाएर पनि पिउन सक्नुहुन्छ वा जुसमा ओखर हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ ।
– तपाईंले दुईदेखि तीनवटा ओखर राती भिजाएर राख्नुहोस् र बिहान भएपछि यसको सेवन गर्नुहोस् । यसैगरी तपाईं यसलाई बिहान ओट्समा मिसाएर पनि खान सक्नुहुन्छ ।
– कतिले ओखरलाई भुटेर त्यसलाई स्न्याक्सको रुपमा पनि खाने गर्छन् वा तपाईं सलादको रुपमा पनि ओखरको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
ओखर खानुका हानीः
हुन त ओखर खानु हरेक तरिकाले फाइदाजनक हुन्छ र यसका केही खराब प्रभाव पनि हुनसक्छन् त्यसैले सही मात्रामा मात्रै यो खानुपर्छ । यदि तपाईंले चाहिने भन्दा बढी ओखर खानु हुन्छ भने यसले तपाईंको पेट दुखाउँछ । कतिलाई ओखरको एलर्जी पनि हुन्छ । यो बुझेर मात्रै खानुहोस् ।
यदि तपाईंलाई कुनै गम्भीर रोग लागेको छ भने पनि डाक्टरको सल्लाह पछि मात्रै ओखर खानुहोस् ।
Previous मंगलबारदेखि तीनदिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने
Next सवारी चालकको लाइसेन्स लिन चाहनेहरुलाई खुसीको खबर